Mayelana NATHI - JUMP GLASS
I-JUMP yinkampani yeqembu enesipiliyoni seminyaka engama-20 egxile ekukhiqizeni okuhlukahlukene okuphakathi nasebangeni eliphakeme lokusetshenziswa kwansuku zonke kwengilazi nebhodlela lengilazi. Kutholakala esifundazweni sabavakashi esisogwini - iShanDong, njengenhloko esempumalanga yeNew Eurasian Continental Bridge，unetheku elikhulu lamazwe omhlaba eChina- QingDao Port, IJUMP inendawo eyingqayizivele yendawo, edale izimo ezinhle zemvelo zebhizinisi lamanye amazwe.
Ihlanganisa indawo ka-50000 ㎡ ebala abasebenzi abangaphezu kuka-500, kunemigqa engaphezu kwengu-26 yokukhiqiza ku-workshop, ukukhiqiza amandla angama-pcs ayizigidi ezingama-800 ngonyaka. Kunemishini eyisithupha yokuhlola okuzenzakalelayo enekhamera nokusebenza kwemigqa emi-2 yokupakisha okuzenzakalelayo engaqinisekisi nje kuphela ukuthi ikhwalithi ibuye ibuyekeze ukusebenza kahle kokukhiqiza. Ingabe ukosa, ukuphrinta, isithwathwa okubandayo, ukubhoboza isanti, ukubaza, ukusika nokufaka umbala njll. Umugqa wokukhiqiza wokucubungula ojulile, unganikeza ngemikhiqizo eyodwa - yokumisa ingilazi, futhi ibinganikeza ngebhodlela le-cap, ilebula nebhodlela lethu lengilazi ndawonye njengezidingo zamakhasimende. Ibhodlela lomoya, ibhodlela lewayini, ibhodlela likabhiya, imbiza yengilazi, ibhodlela lesiphuzo, ibhodlela lokudla, amabhodlela ewayini akhethekile ahlukahlukene aphakathi naphakathi naphakathi, impahla eluhlaza okwesibhakabhaka, impahla eluhlaza okwesibhakabhaka, impahla ecwebezelayo ecwebezelayo noma impahla yengilazi yensengetsha, inkomishi yengilazi, ipuleti lesithelo ˴ umasoni imbiza, isiphuzo sokuphuza ibhodlela ˴ ingilazi yokuhambisa, ingilazi imbiza ehlukahlukene ingumkhiqizo wethu othandwayo. Futhi khiqiza ingilazi ephezulu ye-borosilicate engalingana kahle ngemicrowave nomshini wokuwasha, unokushisa okumelana nokushisa okungaphezu kwama-250 ℃. Yonke imikhiqizo ingadlula ukuhlolwa kwesitifiketi se-FDA, LFGB ne-DGCCRF, izitshalo zethu zinezitifiketi zochungechunge lwe-ISO. Inqubo yokukhiqiza eqinile inikeza isiqinisekiso sekhwalithi.
Yiba nenkampani yokungenisa nokuthekelisa esebenza ngokuzimela ngokusekelwa kwezobuchwepheshe okuthuthukile okunamabhodlela engilazi okuthekelisa nezimbiza zengilazi eYurophu, e-United States, eNingizimu Melika, eNingizimu Afrika, e-Southeast Asia, eRussia, e-Asia Ephakathi kanye naseMakethe yaseMpumalanga Ephakathi, lapho kuthokozela okuhle isithunzi. Kunamagatsha eMyanmar ˴ Philippines ˴ Vietnam ˴ Thailand ˴ Russia ˴ Uzbekistan. Ngeminyaka engaphezu kwengu-20 umkhakha wesipiliyoni ekukhonzeni amakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe, i-JUMP ikhulele enkampanini yobuchwepheshe inikezela ngemikhiqizo yokupakisha ingilazi yomhlaba wonke nezinhlelo zensizakalo. Impilo eluhlaza, enobungani bemvelo nenempilo yabantu ibilokhu iyisiqondiso secebo lethu lokuthuthuka. Jump njalo ubuyekeze ezobuchwepheshe kanye nezinto ezintsha zilandela ibanga elisha sha lamazwe aphesheya, iqembu lokwakha lobungcweti linganikeza insizakalo yomuntu siqu njengokufuneka okuhlukile ekuphrinteni, ukupakisha, ukwakhiwa komkhiqizo, njll. Umgomo wethu uthi: ikhwalithi yokuqala, isevisi eyodwa yesiteshi, ukuhlangabezana nesidingo sakho, ukunikela izixazululo nokufeza ukubambisana kwe-win-win.
Ibhodlela Lamafutha Omnqumo, 250ml Olive Oil Bottle, I-Olive Oil And Vinegar Glass Cruet, Isikwele Ibhotela Lamafutha Omnqumo, I-Olive Oil Bottle, Imbiza Yokugcina Amafutha Olive,